downloads 9 970
Dassault Breguet Atlantic 1 US Navy na 5 textures + omenala na-ada.
Breguet br 1150 Atlantic bụ a Maritime patrol ugbo elu, mere site Breguet Aviation na-amịpụta SECBAT, a European ewu Breguet Atlantic. Ọ na-e ahịa ebe ọ bụ na 1971 site Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation (AMD-BA) ghọrọ ke 1990 Dassault Aviation. Ọ e wuru na 115 mbipụta na abụọ nsụgharị na ejikwara site 5 mba.
The Atlantic 2, ma ọ bụ abbreviated ATL2, nke abụọ version br 1150 Atlantic, na-eje ozi ugbu a na French naval ụgbọelu.
Onye edemede: Massimo Taccoli na Jean-Pierre Langer